Source Control ဆိုတာဘာလဲ? | mmshare
Developer တစ် ယောက် အနေနဲ့ Source Code Control (SCC) က နေ့စဉ်ဘ၀မှာ တော်တော်ကို အရေး ပါပါတယ်။ Developer တစ်ယောက်တည်း လုပ်ရတဲ့ project တွေမှာ code တွေကို တစ်ခြား developer တွေ နဲ့ share လုပ်စရာ မလိုလို့ Source Code Control (SCC) က မလိုအပ်ပေမယ့် team တစ်ခု အနေနဲ့ ( တနည်းအားဖြင့် အခြား developer အများကြီးနဲ့ ပူးပေါင်းပြီး) Project တစ်ခုကို လုပ်ရတော့မယ် ဆိုရင်တော့ code တွေကို တခြား developer တွေနဲ့ share လုပ်ဖို့ မရှိမဖြစ် အရေးပါလာပါပြီ။
ဒါဆိုရင် မေးစရာတစ်ခု ရှိလာပါတယ်။ “Source Code Control (SCC) မသုံးပဲ code တွေကို network drive မှာထားပြီး developer အားလုံး share လုပ်ပြီးသုံးမယ် မရဘူးလား” အဲလိုလဲရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒါဟာ အကောင်းဆုံး အဖြေ (The Best Solution) တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဘာဖြစ်လို ့လဲဆိုတာကို အခုလို ဥပမာလေးနဲ့ စဉ်းစားကြည့်ကြရအောင်။
Developer A နဲ့ Developer B နှစ်ယောက်ဟာ File တစ်ဖိုင်တည်း ကို modify လုပ်ရပြီ ဆိုပါတော့။ Developer A က code ကို modify လုပ်တယ် ။ ပြီးတော့ သူ့ရဲ့ modify လုပ်ပြီးသား updated file (A's version ) ကို network drive မှာ update လုပ်လိုက်တယ်။ Developer A ပြီးမှ Developer B က လည်း code ကို modify လုပ် ပြန်တယ် ပြီးတော့ updated file (B's version) ကို network drive ပေါ်မှာ ထပ်ပြီး update လုပ်လိုက်ပြန်တယ်။ ဒါဆိုရင် နောက်ဆုံး ကျန််ခဲ့တဲ့ latest updated file က ဘယ်သူရဲ့ version လဲ။ Developer A ရဲ့ version လား developer B ရဲ့ version လား။
အဖြေက ရှင်းပါတယ်။ Network Drive တစ်ခုထဲက ဖိုင်တစ်ဖိုင်ကို ရိုးရိုးလေး Update လုပ်လိုက်တာလေ။ နောက်ဆုံး update လုပ်တဲ့ Developer B ရဲ့ version ပေါ့။ အဲဒီတော့ Developer A ရဲ့ modify လုပ်ထားတဲ့ version က ပျောက်သွားပြီပေါ့။ အဲလိုမျိုး မလိုလားအပ်တဲ့ ပြသနာတွေကိုရှောင်နိုင်ဖို့ အတွက် source control ကိုသုံးရမှာပါ။ ဒါဆို source control ဆိုတာဘာလဲ ဘာတွေလုပ်ပေးနိုင်လဲဆိုတာသိဖို့ လိုလာပါပြီ။ Source Control ဆိုတာ source code file တွေရဲ့ အပြောင်းအလဲတွေကို တစ်လိုင်းခြင်းစီ ခြေရာခံပေးနိုင်တဲ့ developer မြောက်များစွာကနေ များပြားလှတဲ့ အပြောင်းအလဲတွေ လုပ်ထားတဲ့ code တွေကို version အလိုက် မပျောက်မပျက်အောင် သိမ်းပေးထားနိုင်တဲ့ software တစ်ခုပါ။
This is the first article of the author.
More articles in Tips category
သင်္ချာ၊ တစ်ကြိမ်မြောက်၊ နှစ်ကြိမ်မြောက်၊ သုံးကြိမ်မြောက်၊ nth ကြိမ်မြောက် နှင့် CSS